एनसेलको सिमकार्ड खरिद गर्दा उपहार योजना – Gulmiews
एनसेलको सिमकार्ड खरिद गर्दा उपहार योजना
June 16, 2015 Raju Gautam
गुल्मी असार १÷गुल्मीमा चलिरहेको भारतिय पेनसन क्याम्पलाई मध्य नजर राखेर एनसेल नेपालले बिभिन्न उपहार योजना ल्याएको छ । क्याम्पको अबसरमा एनसेल नेपालले सिम कार्ड खरिद गर्दा बिभिन्न उपहार योजना जारमा ल्याएको हो । सदरमुकाम तम्घासमा १५ दिन सम्म संञ्चालन हुने पेन्सन वितरण क्याम्पबाट गुल्मी जिल्ला लगायत बाग्लुङ्ग, अर्घाखाँची ,प्युठान लगायतका ठाउँका भु.पु. भारतिय सैनिकहरु करिव ७ हजार ५ सयले पेन्सन क्याम्पमा बुभ्mने गर्दछन् ।
एनसेल नेपालले सिम अफर योजना अन्र्तगत ग्राहकले एक एनसेल सिम काड खरिद गर्दा एन सेल नेपाल लेखेको डायरी र पेन उपहार योजना ल्याएको छ । त्यस्तै दुई वटा एनसेल सिम काड खरिद गर्दा एनसेल नेपाल लेखेको डायरी,पेन र रु ५० को रिचार्ज कार्ड पनि उपहार योजनामा समावेस गरेको एनसेल नेपालका गुल्मी जिल्लाका अधिकृत बिक्रेता जनक पन्तले बताए । गुल्मी जिल्लाको तम्घासमा एनसेल नेपालको स्टल राखी उक्त उपहार योजनाको सिम काड बिक्री गरिएको पन्तले बताए । मंगलवार सम्म तम्घासमा राखिएको स्टलबाट १ सय ७५ जना बृद्धा पेनसनर तथा ग्राहकले उक्त उपहार योजनाको एनसेल सिमकार्ड खरिद गरेको पन्तले बताए । एनसेल नेपाललेले राखेको स्टलमा एक प्रति नागरिताको फोटोकपी र एक प्रति पासपोर्ड साईजको फोटो सहित आश्यकता अनुसार उपहार योजनाको सिमकार्ड किन्न सकिने पन्तले बताए । यो उपहार योजना गुल्मी जिल्लामा यहि भारतिय पेन्सन क्याम्प अबधीर रहने बताईएको छ ।
Related Posts	यसरी घट्छ ३६ प्रतिशतको ब्याज दर ६ प्रतिशतमा, सयकडा ५० पैसाका दरले ऋण...	October 13, 2016	गुल्मीमै बन्न थाल्यो वाईन, जुस र जाम...	October 4, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	राति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने